Ungakhuleka kanjani futhi kanjani kuSt Joseph | Ngiyamthanda uJesu
Ukuthandaza kanjani kuSt
di UPaolo Tescione - Mashi 19, 2021
Kungani uthandaza ISt. Joseph? USt.Joseph wayengumondli woMndeni Ongcwele. Singabeka yonke imindeni yethu kuye, ngokuqiniseka okukhulu kokwaneliseka kuzo zonke izidingo zethu. Uyindoda elungile nethembekile uNkulunkulu ayibeke njengomqaphi wendlu yakhe, njengomqondisi nokusekelwa kukaJesu noMariya: uzoyivikela kakhulu imindeni yethu, uma siyibeka kuye futhi siyincenga ngokusuka enhliziyweni.
Ukuthandaza eSt. Joseph: noma yikuphi grazia omunye ucela uSt.Joseph uzonikezwa impela, noma ngubani ofuna ukukholelwa kufanele enze isivivinyo ukuze akholwe ”, kusho uSt. Ngathatha uSanta Joseph okhazimulayo njengommeli wami nomphathi wami futhi ngazincoma kuye naye intshiseko. Lokhu ubaba nomvikeli wami bangisizile ezidingweni engazithola ngikuzo nakwezinye eziningi ezibucayi, lapho udumo lwami nempilo yomphefumulo kwakusengcupheni. Ngabona ukuthi usizo lwakhe lwalulukhulu njalo kunalokho engangikulindele.
Noma yimuphi umusa oceliwe kuSt Joseph uzonikezwa impela
Kunzima ukukungabaza, uma sicabanga ukuthi phakathi kwabo bonke abangcwele abathobekile umbazi waseNazaretha yilona osondelene kakhulu noJesu noMariya: wayesemhlabeni, ikakhulu ezulwini. Ngoba wayenguyise kaJesu, noma engowokutholwa, futhi kaMariya wayeyindoda. Umusa otholakala kuNkulunkulu ngokusebenzisa wona awunakubalwa ngempela St. Joseph. Umphathi jikelele weSonto ngokuyalelwa UPapa Pius IX, waziwa nangokuthi umphathi wezisebenzi kanye nowokufa nowemiphefumulo esihlanzweni, kepha ukusekelwa kwakhe kudlulela kuzo zonke izidingo, kusiza zonke izicelo. Impela ungumvikeli ofanele futhi onamandla wayo yonke imindeni yamaKrestu, njengoba ayenjalo woMndeni Ongcwele.
Sithandaza nsuku zonke ngaleyo ndlela sizinikela ku-Saint Joseph: ezandleni zakho, O Joseph, ngishiya izandla zami ezimbi; eminweni yakho ngiyahlangana iminwe yami entekenteke ngiyathandaza Wena, owondla iNkosi ngomsebenzi wansuku zonke, unika isinkwa kuwo wonke amatafula nokuthula okufanele igugu. Wena, mvikeli wasezulwini wayizolo, namuhla nakusasa, wethula ibhuloho lothando elihlanganisa abazalwane abakude. Futhi lapho, ngilalela isimemo, ngibuyisela isandla sami kuwe, ngamukela inhliziyo yami ephendukile futhi ngiyilethe kuNkulunkulu kancane. Bese kuthi noma izandla zami zingenalutho, zikhathele futhi zisinda, uma uzibheka uzothi: "Zinjalo nezandla zabangcwele!"